Britain: Ra’iisal Wasaare Theresa May oo booqasho rasmi ah ku maraysa China – Kasmo Newspaper
Britain: Ra’iisal Wasaare Theresa May oo booqasho rasmi ah ku maraysa China
Updated - January 31, 2018 11:24 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha Britaain, Theresa May, ayaa booqasho rasmi ah ku joogta China, halkaas oo ay ku sugnaan doonto ilaa Jimcaha, 2da Febraayo, si ay horey ugu mariso xiriirka ganacsiga 2da dal.
Wargayska ‘The Guardian’ ayaa qoraya in May ballan qaadday sidii ay arrimaha xuquuqda aadanaha ula soo qaadi lahayd Madaxweyne Xi Jinping iyo R/Wasaare Li Kejang, kulankeeda qorshaysan barri oo Khamiista ah.
Jasiiradda Hong Kong oo horey u ahayd Maxmiyad British ah, waxaa laga soo bilaabo 1997kii ay noqotay Gobol Shiina ka tirsan oo uu ka jiro maamul gaar ahaaneed, laguna dhaqo ‘Basic Law’ oo ah Dastuur ku fadhiya Xeerarka ‘Anglo-saxon’, sida Pekin iyo London ku heshiiyeen.
Laakiin sannadadii dambe Shiinuhu wxay muujiyeen in aanay xurmayn ballamadaas, iyaga oo faragalin baahsan ku sameeyay qaybaha siyaasadda, warbaahinta iyo tacliintaba.
The Guardian wuxuu si gaar ah u xusayaa, in kasta oo May ballanta qaadday, haddana waxay u dhowdahay in aanay ka dhabayn, iyada oo Saraakiisha Britishku jeclayn siyaasadda fagaare ka-sheegga (By Megaphone Diplomacy), doodaha qaarkoodna u haysta in ay waxtar ku leeyihiin albaabbada xiran.
Wargayska ‘Global Times’ ee Shiinaha ayaa qaba in booqashada Theresa May ee Shiinaha tilmaan u tahay sida Pekin uga cayaarayso kaalin muhiim ah arrimaha Yurub Brexit ka dib.
Agaasimaha Waaxda Culuunta Yurub ee Machadka ‘China Institute of International Studies’ Cui Hongjian, ayaa ku macnaynaya in ka-bixitaanka Britain ee Midowga Yurub faa’iido u yahay xiriirka Britain iyo China.
Taas oo Shiinuhu aaminsanyihiin in Britain madaxbannaani buuxda u yeelan doonto arrimaheeda dhaqaale,sidaasna 2da dal ku yeelan karaan xiriir dhaqaale oo muhiim ah ‘Strategic Partnership’.
Ra’iisal Wasaaraha waxaa safarkeeda ku wehelinaya odeygeeda Philip May iyo wafdi lixaad leh oo ka kooban ganacsiga iyo waxbarashada oo ay ku jiraan madaxda 50 Shirkadood oo waaweyn iyo wakiillo ka socda Jaamacadaha dalka.
Saraakiisha Shiinuhu waxay rumaysanyihiin in booqashada May sii xoojin doonto kalsoonida 2da dhinac isku qabaan iyo xilli dahabi ah oo xiriirkooda labageesoodka ah gali doono.